Isampula 001: Inqubo Yokusebenza Ejwayelekile Yekhamera Yomzimba (SOP) - Izixazululo ze-OMG
Isampula engu-001: Inqubo Esebenzayo Ye-Camera Camera standard Working (SOP)
Ikhamera Ezalelwa Umzimba
Inqubo Ejwayelekile Yokusebenza
Ishidi Lokulawula Imibhalo
Isihloko: Inqubo Esebenzayo Ye-Camera Video Camera standard
Isihloko: Ukusetshenziswa kwamakhamera wevidiyo omzimba owenziwe ngamaphoyisa we-NSW
Ukuhlukaniswa Kwezokuphepha: NGEKUFINYELELE
Usuku lokushicilelwa: XX / XX / XXX
Inombolo yenguqulo yamanje: Uhlobo lokugcina XX
Usuku lokubuyekezwa: 1 July 2019
Isitatimende se-copyright: I-copyright yale dokhumende inikezwe i-XXXXX © XXXX
Uhlobo # Idatha yokugunyazwa yenguquloe Ukugunyazwa I-TRIM / isifinyezo sezinguquko
1.6 25 August 2017 UXXXXXX Okusalungiswa kwe-SOPs
2.2 IXX XXX XXX CET Uhlobo lokugcina
Inhloso yale nqubomgomo ukusungula imihlahlandlela yokusetshenziswa, ukuphathwa, ukugcinwa nokubuyiswa kokuqoshwa kohlelo lwekhamera egqokwa ngomzimba (BWC) yomnyango. Ama-BWC azosetshenziselwa ukuxhasa umsebenzi woMnyango futhi asize isikhulu somnyango ekwenzeni imisebenzi yaso ngokunikeza ukuqoshwa okuqondile nokungacwasi ukusebenzisana phakathi kweSikhulu nomphakathi.
Le nqubomgomo isebenza kuwo wonke amalungu anikezwe i-BWC, futhi noma imaphi amalungu, izisebenzi zokuphenya, kanye nabasebenzi abasekelayo ababhekele ukulungisa amacala okushushiswa kobugebengu kanye nokukhululwa kwamarekhodi omphakathi.
I-BWC yeseka imisebenzi yamaphoyisa esebenza. Izosetshenziswa lapho iphoyisa likholelwa ukuthi kufanelekile ukuqopha izehlakalo ezenzeka noma imvelo ezisebenza kuyo. Amakhamera azosekela iphoyisa ngokuqopha ubufakazi obubonakalayo kanye nokulalelwayo kwesigameko noma ubugebengu.
Ukusetshenziswa kwe-BWC kuzoba ngesehlakalo esithile, futhi amakhamera azogqokwa umfaniswano / izingubo zamaphoyisa ngendlela eyeqisayo. Amalungu omphakathi azokwaziswa ukuthi ayaqoshwa uma kungenzeka ukwenza lokho ngaphambi noma ngesikhathi sokuqalisa ukuqoshwa. Uma kungenakwenzeka ukwenza kanjalo ngaphambi noma ngaleso sikhathi, ngokushesha okungenzeka ngemuva kokuqalisa ukuqoshwa.
Ukubhalwa phansi kwesithombe kungasetshenziswa kuphela ngaphansi kwezimo ezithile njengoba kubekiwe eMthethweni noma ngaphansi komthethonqubo owenziwe ngaphansi koMthetho. Uma iphoyisa lihluleka ukuqopha okuthile okuhambelana, lingacelwa ukuba lichaze isinqumo salo kumphathi.
Okuqukethwe kwe-BWC kuzogcinwa ngokuphephile, kufakwe kungobo yomlando bese kuchithwa.
Izimiso Eziyisihlanu Zokuqondisa zinikeza isisekelo sokusetshenziswa okufanele kwe-BWC ngabaphathi.
1. Imishini ye-Body-Worn Camera izosetshenziswa yiPhoyisa ekwenzeni imisebenzi yabo ngokusemthethweni. Isikhulu sizosebenzisa ukwahlulela kwabo lapho sinquma ukuyisebenzisa futhi ukusetshenziswa kwaso kuzocaca futhi kungaphezulu.
I-body-Worn Camera izosetshenziswa yisikhulu ukuqopha izehlakalo, izehlakalo nobufakazi. Kuzoba nezimo ezithile lapho kungafanele kusetshenziswe khona i-Body-Worn Camera futhi ezinye izikhathi lapho ukusetshenziswa kwayo kungenzeka kungafaneleki.
3. Ikhamera ye-Body-Worn Camera isekela izindlela ezijwayelekile zokubuthana kobufakazi; akuzibekeli indawo.
4. Ukuqoshwa kweCamera-Worn Camera kuzocutshungulwa ngokuphepha futhi kuphathwe ngokuya ngomthetho ofanele, inqubomgomo nezinqubo.
5. Isikhulu sizohlinzeka ngemininingwane ejwayelekile emphakathini ngokusetshenziswa kwayo yi-Body-Worn Camera.
2. Ikhamera Yomzimba Ogqokile - Iyasebenza izinkombandlela
2.1 Ukuhlola kwangaphambili kwe-Shift
Ngaphambi kokushintshwa ngakunye, izikhulu ezinikezwe i-BWC zizoqinisekisa ukuthi lolu phiko lukhokhiswa kahle. Ngaphezu kwalokho, izikhulu zizohlola ikhamera yazo ukuze ziqinisekise ukuthi akukho monakalo obonakalayo futhi ifoni isebenza kahle. Noma yimuphi umonakalo obonakalayo noma ukukhathazeka ngokusebenza kwemishini kuzokwaziswa umphathi wesilungu ngokushesha lapho sekwenzeka lokho.
2.2 Imibandela Yokusebenzisa
Uhlelo ngalunye lwe-BWC luzosetshenziselwa ukubhala imicimbi eyehlukene eyenzeka ngesikhathi sokuhanjiswa komsebenzi okwabelwe sona. Lapho usuqede ukuguquka kwesikhulu esabelwe, yonke imininingwane efakiwe izogcinwa endaweni ephephile yokugcina isitoreji. Lapho kubanjiwe, lokhu okuqoshwa kuvikelwe ngephasiwedi futhi akunakushintshwa.
Ubuchwepheshe be-BWC buhlinzeka ngezinhloso zoMnyango zokuqoqa ubufakazi bezokushushiswa, buqinisekise ukubophezelwa kokubambisana kwezikhulu kanye nezakhamizi, luhlinzekele imisebenzi yokuhlola yokuphatha, futhi lunikeze usizo oluhle lokuqeqeshwa ngokuvumela ukuhlolwa kokuziphatha kwezikhulu nokwenziwa yisakhamuzi.
I-BWC ingasetshenziswa yisikhulu esigqoka umfaniswano, kepha noma yikuphi ukusetshenziswa kumele kube ngaphezulu futhi lapho kwenziwa ngokusemthethweni umsebenzi. Ukusetshenziswa kwe-Overt kusho ukusetshenziswa kwensiza ye-BWC ngendlela yokuthi ibonwe futhi ikhonjwe njengedivaysi yokuqopha ividiyo nomsindo. Idivayisi kufanele igqoke ukuze ibonwe futhi ingafihlwa, ifihlwe noma ifihlwe. Uma kungenzeka, izikhulu zizokwazisa abantu abakhuluma nazo ukuthi izingxoxo zabo ziqoshwa yiBWC egqokwa yisikhulu.
Noma isiphi isikhulu sezingubo ezigqamile akumele sisebenzise i-BWC. Zonke izikhulu ezigqoke umfaniswano wazo, ngenkathi zenza imisebenzi yokuphendula umsebenzi, kufanele zigqoke njengengxenye yomfaniswano wazo i-BWC ukuze isetshenziswe ngokuya ngala ma-SOP. Isikhulu esenze imisebenzi ephuthumayo kanye / noma yophenyo kufanele futhi sisebenzise futhi sisebenzise i-BWC ukuxhasa imisebenzi yabo yobuphoyisa.
2.3 Ukusetshenziswa Kwesikhulu kwe-Cam Worn Camera - Ulwazi Olujwayelekile
Isiphathimandla ngeke kudingeke ukuthi sibhale phansi yonke imisebenzi yabo noma konke ukuxhumana okwenzekayo ngenkathi besemsebenzini. Ukurekhodwa kwe-BWC kufanele kube okuqondene nezehlakalo (noma ngabe lokho okuqoshiwe ekugcineni kuyadingeka ukuze kusetshenziswe njengobufakazi). Iziphathimandla ezine-BWC zizokwenza konke okusemandleni ukwenza i-BWC yabo kubo bonke othintana nabo bokuphenya noma bokuqinisa umthetho kubandakanya, kepha kungagcini kulokhu:
1. Izimoto ziyama
2. Uphenyo lomshayeli oluphazamisekile
3. Izingxoxo ze-Field nezitobha zabahamba ngezinyawo
4. Ukuhambisa izakhamizi noma iziboshwa
5.Usesho lwabantu noma impahla
6. Izingcingo ezithunyelwe zenkonzo
7. Izigcawu zobugebengu
8. Izigcawu ezenzekile (zingavalwa uma ilunga lilinde elolini lokuphonsa futhi kungabikho msebenzi owengeziwe wokuqinisa)
9. Ukusolwa / izitatimende zofakazi kanye nezingxoxo
10. Ukulandela izimoto nezinyawo
11. Ukuphendula okuphuthumayo kwizigameko ezibucayi
Uma i-BWC iqopha, amalungu kumele aqhubeke nokuqopha kuze kube kuphothulwa umcimbi noma aze ashiye umcimbi futhi nokuzibandakanya kwawo emcimbini kuphele.
Yize kungadingeki ngenqubomgomo noma umthetho wezwe, izikhulu ezabelwe i-BWC zingakuthola kubalulekile ukwazisa amanye amaqembu ukuthi ziyaqoshwa. Lokhu kufakazele ukuthi kunomthelela ekubumbeni ngokubambisana kwezifundo futhi kukhonjisiwe ukunciphisa izehlakalo zokusebenzisa amandla.
Ngokuhambisana nezindlela ezibalulekile zoMnyango zenhlonipho nobuqotho, izikhulu ezinikezwe i-BWC zizolandelela lezi ziqondiso ezilandelayo:
1. Ama-BWC ngeke enziwe asebenze endaweni lapho okulindelwe khona ubumfihlo njengamakamelo okugqoka, amakamelo okhiye nezindlu zangasese. Noma ikuphi ukuqoshwa okunenhloso noma ngengozi okwenziwe ngaphansi kwalezi zimo kungasuswa ngaphambi kwesikhathi esivamile sokugcinwa kwezinsuku eziyi-7 ngumphathi wesikhulu.
Ama-BWC ngeke asetshenziselwe ukuqopha ukusesha kwe-body cavity, okuvunyelwe kuphela ukwenzeka esibhedlela noma esimweni sezokwelapha. Ama-BWC azosetshenziselwa ukuqopha usesho olwenziwe ngamaphoyisa emkhakheni (isb., Ukwehla kwezimoto, ukuseshwa kwezimoto).
3. Ama-BWC ngeke enzelwe ngamabomu ukurekhoda izingxoxo zezikhulu ezikanye naye ngaphandle kolwazi lwazo ngenkathi kwenziwa imisebenzi ejwayelekile nengeyona yokuphoqelela. Lokhu kufaka phakathi ngenkathi isikhulu sisaphumule, ngenkathi sibika sibhala, sihamba izingcingo, sixoxa njalo nezinye izikhulu, sixoxa nelinye icala, noma senza eminye imisebenzi yezokuphatha.
Ama-BWC ngeke asetshenziselwe ukuqopha izingxoxo zomphakathi kanye / noma ezinye izikhulu zomnyango.
5. Amalungu asebenzisa i-BWC ngeke aziqophe ngamabomu izikhulu ezingekho ngaphansi noma izazi eziyimfihlo.
6. Ama-BWC ngeke asetshenziselwe ukuqopha noma yimuphi umsebenzi noma umsebenzi owenziwe nguwe.
2.5 Ukunqaba Ukuqopha
Amaphoyisa nawo angayeka ukuqopha uma ekholelwa ukuthi kunezizathu eziphoqayo zokwenza lokho. Lezi zizathu kufanele zibekwe kwirekhodi levidiyo ngaphambi kokuqoshwa kokuqoshwa.
2.6 Ukulayisha Umzimba Wekhamera Ekhamera
Ekupheleni kwenguqu buyisela i-BWC esiteshini sokuma lapho ukulayisha kuzoqala khona ngokuzenzakalelayo. I-Footage izohlala kuseva yendawo ize 'imakwe' ngumsebenzisi njengokuqukethwe okuyikho
yenani lobufakazi okusho ukuthi: i-footage ingahle iphumelele, inqubo yokuqondiswa kwezigwegwe, isimangalo sezomthetho noma isikhalazo. Okuqukethwe okungamakiwe kubhekwa njengokungengufakazi futhi kuzohlala kungacaciswanga kuseva yendawo isikhathi esiyinyanga eyodwa, lapho kuzosuswa ngokuzenzakalelayo.
Ukusakazwa kwe-BWC / okuqukethwe kungathengwa ngaphansi kwezigaba ezintathu (3):
2. WHS (Umsebenzi, Impilo Nokuphepha) - izosetshenziswa kuphela lapho okuqukethwe kungamakiwe njengobufakazi futhi kuhlobene nomsebenzi, impilo kanye nokuphepha okungaba ngezintshisakalo
3. Isikhalazo - izosetshenziswa kuphela lapho okuqukethwe kungamakiwe njengobufakazi futhi kuphela lapho iphoyisa likholelwa ukuthi ukugcina lokho kuboniswa kungasiza ekuphenyweni kwe
2.7 Kusetshenziswa i-Video-Worn Video Footage
Uma isithombe sephoyisa senziwe, noma kungenzeka sarekhodwa yi-BWC, futhi leso sikhulu sinokukhathazeka ngokukhishwa kwesithombe sazo (isb: kuhlinzekwe njengengxenye yobufakazi obufushane), kufanele zeluleke
I-OIC yecala uma bafuna ukuthi isithombe sabo siphinde sikhishwe ngaphambi kokukhululwa.
Musa ukusebenzisa, ukuxhumana noma ukushicilela okuqukethwe kwe-BWC ngaphandle kokuthi kungene kokunye okusebenzisa okugunyaziwe, njengokuthi:
• ezinkantolo zobugebengu
• Imibuzo yokubuza kanye nemibuzo yamaKoloni
• lapho impahla idalulwe enkantolo evulekile noma lapho impahla ingene khona emphakathini
• ukuphenya amacala
• Ukulungiselela kafushane / isitatimende, noma izeluleko zokuthi umshushisi kufanele aqaliswe futhi ngaliphi icala
• Ukuphenywa kwezikhalazo kubandakanya ukwenganyelwa kweKhomishini Yokusebenza Komthetho
• Ixhumene nokuqeqeshwa kanye nokufundiswa kweSikhulu
• exhunywe nokusetshenziswa komthetho wokwenza umsebenzi okwenziwa yisikhulu
• Uphenyo lwezehlakalo ezibucayi
Ungakopisi, usebenzise noma udalule izinto ze-BWC ngezinhloso ezingezona ezisemthethweni, njengokubonisa kunoma yimuphi umuntu ongagunyaziwe noma wabelane nabezindaba zokuxhumana. Ezimweni ezithile, kungaba semthethweni ukukhipha i-BWC yezindaba kwabezindaba ngegunya.
Ikhophi ephelele yokubhalwa kwe-BWC, noma uhlobo oluhleliwe lwenkantolo, ukuzivikela nokushushiswa kungadalwa. Izithombe ezisuka ekubhasikidini nazo zingabanjwa njengezithombe ezisetshenziselwe njengobufakazi futhi zingase
funa ukuhambisana nomthetho weCrimes (Forensic Proc inqubo). Amakhophi omdlalo we-BWC wokukhiqizwa enkantolo angenziwa ngezindlela eziningi zevidiyo kufaka ne-DVD. Kwezinye izimo, ukuhlela ngokwezifiso kungadingeka kokuqukethwe kwe-BWC.
2.8 Ukubuka i-Video-Worn Video Footage - Umuntu Omangalelwe / Omele Umthetho
Lapho okuqukethwe kwe-BWC kufanele kusetshenziselwe ukusekela icala noma inqubo yezomthetho, iphoyisa linganikeza umsolwa, kanye / noma ummeleli wakhe osemthethweni, ithuba lokubuka okuqukethwe kwe-BWC. Lokhu kufanele kunikezwe ngaphambi kosuku lokuqokwa kwenkantolo yokuqala kanye / noma ngaphambi kokufakwa kokufaka icala okungenacala. Uma ithuba lamukelwa, ukubukwa kwebhasi le-BWC kuzokwenziwa lula ngaphansi kokuqashwa kwamaphoyisa.
Uma umsolwa noma ummeleli wakhe osemthethweni ecela ukubukwa kwe-BWC, lokhu nakho kungasizwa.
2.9 Ukubuyekezwa kanye nocwaningo
Abaqondisi bezikhulu bazoba nokufinyelela kwegagasi le-BWC lokucwaningwa kokulandela izinqubo namazinga weCamera Worn Camera. Uhlelo lokusebenza lwe-BWC luzokhiqiza 'amasampula' okungahleliwe ukuze kuhlolwe abaphathi bezikhulu njalo noma ngokufunwa.
Ukukhishwa kwe-Video-Worn Video Footage
Umphathi we-Chief Supervisor angakhulula izithombe ze-BWC emphakathini ngenxa yezizathu eziningi, kufaka phakathi:
• ukulandela abasolwa ababefunwa
• ukuthola abantu abaphunyukile noma abaphume esitokisini
• ukuphepha komphakathi
2.11 Ukulungiswa / Ukubuyiselwa
Lapho i-BWC idinga ukulungiswa noma ukufaka esikhundleni ngenxa yomonakalo, iphoyisa elinikeze ikhamera kufanele lazise umphathi wabo. Umphathi kufanele aphenye, futhi uma eqinisekisile, asuse ikhamera ekusebenzeni. Uma i-kiosk ye-BWC, isiteshi sedokodo noma isoftware ingasebenzi njengoba kufanele, bika udaba kumphathi. Umphathi kufanele aphenye futhi uma eseqinisekisile, azise abathengisi. Uma uhlelo lonke lokusebenza lungasebenzi, cabanga ukumiswa kokusetshenziswa kwekhamera kuze kube yilapho ukungasebenzi kahle kulungisiwe futhi uhlelo lubuyela esimweni sokusebenza. Izingxenye zokubuyiselwa kwe-BWC kanye / noma amasistimu ayatholakala ngokuxhumana nomthengisi we-BWC ngokusebenzisa umphathi.
I-Protocol Yengozi Ebucayi
1. Isigameko esibucayi ngenhloso yalesi SOP noma yisiphi isenzo samaphoyisa noma isenzo esiholela ngqo noma ngokungaqondile ekulimazeni okukhulu emzimbeni noma ekufeni kwilungu lomnyango kanye / noma yisakhamuzi.
2. Uma kwenzeka isigameko esibucayi, amalungu anikezwe ikhamera egqoke isidumbu ayokwenqaba ukubuka imininingwane eqoshiwe kuze kube yilapho uphiko oluphenya obhekele ukuphenya lufika endaweni yesehlakalo.
3. Uma kwenzeka isigameko esibucayi siphenywe yi-ejensi yangaphandle, umphenyi we-ejensi yangaphandle kufanele enze isinqumo sokuthi lowo obandakanyekayo uzovunyelwa ukubuka imininingwane erekhodiwe.
4. Uma kwenzeka isigameko esibucayi siphenywa ngumnyango, induna yamaphoyisa, noma isifiso sayo, siyokwenza isinqumo uma lowo msebenzi / ophikweni oluvunyelwe eyovunyelwa ukuthi abuke imininingwane eqoshiwe.
5. Lesi sigaba asinqenqeli amalungu ezehlakalo ezibucayi ezinamakhompiyutha aqhubekayo wokubuka ukuqoshwa kwamakhamera okugqokwa okungasiza ophenyweni olukhona (isib, izincazelo zomsolwa, izimoto zabasolwa, ukuqondiswa kokuhamba, njll.).
6. Uma kukhona abasetshenziswa yi-BWC ngesikhathi sesigameko esibucayi, umphathi wamaphoyisa abelwe ophikweni oluphenya amacala athinta ubuhlakani kanye ne-Intelligence Bureau futhi ongazibandakanyi nesigameko esibucayi uzokugada ngokomzimba kwanoma iyiphi i-BWC okungenzeka ukuthi ibambe lesi sigameko bese siyisa eseduzane isifunda samaphoyisa lapho umphathi ofanayo wamaphoyisa ezovele awalayishe ku -Evidence.com ngokubeka ucingo lwekhamera kwikhamera yokushaja / ukulanda ukulanda.
Ukubuka okuphelele kwe-8096 Ukubuka kwe-10 Namuhla